Austria: Gabar 13 sano jir ah ayay kufseen kadibna dileen iyadoo dib looga ceshtay Qaarkood Sharciga Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaAustria: Gabar 13 sano jir ah ayay kufseen kadibna dileen iyadoo dib looga ceshtay Qaarkood Sharciga
Austria: Gabar 13 sano jir ah ayay kufseen kadibna dileen iyadoo dib looga ceshtay Qaarkood Sharciga
July 5, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Photo/SOPHIE UPCROFT - NINE NEWS
Maamulka Austria ayaa xiray seddex nin oo reer Afghanistan ah kuwaa oo looga shakisan yahay kufsiga iyo dilka gabar 13 sano jir ah. Hogaamiyaha Austria wuxuu wacad ku maray in uusan hor istaagi doonin hadii loo musaafuriyo Afghanistan.
Meydka gabadha ayaa laga helay meel ku ag taal geed ku yaal degmada Vienna ee Donaustadt Sabtidii, Juun 26. Laba dhalinyaro reer Afgaanistaan ​​ah, oo da’doodu tahay 16 iyo 18, ayaa loo qabtay tuhmanayaasha Isniintii. Labaduba waxay ahaayeen magangalyo-doon; midkood ayaa lagala noqday sharcigiisa.
16-sano jirka wuxuu joogaa Austria kaliya ilaa 7-dii Abriil 2021, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Austrian Press Agency APA .
Ninka saddexaad, oo ah 23 jir reer Afgaanistaan ​​ah, ayaa lagu xiray Vienna fiidnimadii Arbacada iyadoo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa falkan. Maalintii Khamiista, APA waxay soo warisay in baadi goob loogu jiro nin afraad. Eedeysanaha ayaa ah 22 jir u dhashay Afghanistan oo la raadinayay ilaa Talaadadii waaran qabasho oo reer Yurub ah loo diray.
Saraakiisha ayaa sheegay in dhibanaha ay garaneysay labada tuhmane ee hore isla markaana uu si iskiis ah u raacay guriga tuhmanaha 18 jirka ah. Halkaas, sida uu sheegay taliyaha bilayska Vienna Gerhard Pürstl, waxaa la siiyay daroogo ka hor inta aan lakufsan.